IINGCAMANGO EZINGAMA-30 ZOCINGO LOKUBIYA (IMIFANEKISO YOYILO) - AMACHIBI OKUDADA
Eyona amachibi Okudada Iingcamango ezingama-30 zocingo lokubiya (Imifanekiso yoyilo)
Apha sivavanya iingcamango zocingo ezingama-30 zokuyila amakhaya. Ucingo lokubhukuda lubonelela ngokhuseleko kunye nokhuseleko kusapho lwakho nakwamanye amacingo okubhukuda enziwe ngesinyithi, ivinyl, ukhuni, iglasi, kunye nocingo. Kweli phepha gubungela kakuhle ezona ndidi zodidi lweephuli kunye nokukunceda uthathe isigqibo sokuba leliphi elakulungele ikhaya lakho. (Esi sithuba siyinxalenye yethu Uyilo locingo Isikhokelo onokuthi ujonge ezinye izimvo.)
Amachibi okudada anokongezwa okumangalisayo kwiyadi yangasemva okanye eyadini yangaphambili kwaye ukuba ungomnye wabo bantu bathanda ukuhlala kwigumbi lokuqubha elinobumfihlo obufunwa kakhulu, vumela abantwana bakho badlale ngokukhululekileyo bejikeleza okanye babambe amaqela eephuli ngokunyusa iphuli yakho Indawo enocingo lwechibi ngokuqinisekileyo iyimfuneko malunga nobuhle kunye nemfihlo kunye nokhuseleko kunye nezikhuselo.
Olona luvo lokuqala lunokuvakala ukuba luyoyikeka kongezwe ekuphoxekeni kokubona ucingo olomeleleyo lusitha umbono wedama nangona amandla okuthatha isigqibo angathatha uxanduva kuphela ngenxa yabathandekayo bakho. Eli nqaku liza kukukhokela kwezona ndlela zikhethileyo zehlabathi langoku eziza kubonelela ngethemba lobuhle kunye nokusebenza kwangaxeshanye.
Ikhowudi yokubiya echibini lokuqubha
Amaxabiso okubiya echibini
Metal Pool Kucingo olubiyele
I-Aluminium Pool Fence
Ucingo olwenziweyo lwe-Iron Pool
Ucingo lwePhuli yeVinyl
Ucingo lwamachibi eWood
Pool Pool Kucingo olubiyele
Kucingo olubiyele Pool
Pool Pool Uthango
Kucingo olubiyele okwethutyana echibini
Akukho Imingxunya Pool Fence
Iipaneli zokucoca echibini
Ngaphezulu kwePhuli yePhuli yoMhlaba
Ngaphezulu kweeKhithi zoCingo lwePhuli yoMhlaba
Ingcingo yoKhuseleko lwePhuli
Pool yoKhuseleko Pool
Kucingo olubiyele abantwana echibini
Uyilo lokubiya echibini
Wakha wazibuza malunga nomda womda ekufuneka uthango lwechibi lokhuseleko? Kwimeko apho uphulukene nenqaku ucingo lochibi lokhuseleko lineendlela ezahlukeneyo zokufezekisa ukusebenza kwalo kuxhomekeke kubume beyadi yakho. 'Ucingo lweperimeter' yenye yeendlela ezinokufihla njengocingo lwedama eligubungela umda weyadi yakho kodwa kuphela ukuba ucingo luyilelwe ukuthobela imigaqo yokwakha.
‘Ucingo lwangaphakathi’ lubiyele ngokulingeneyo echibini kwaye lolona hlobo luxhaphakileyo locingo oluvala ichibi elijikelezileyo. Umjikelezo kunye neengcingo zangaphakathi zisebenza njengezisombululo ezisisigxina apho ucingo olususwayo lunokusetyenziselwa ukusetyenziswa ngokusisigxina okanye okwethutyana njengoko igama lisitsho. 'Ucingo olususwayo', kwelinye icala lubonelela ngobunono obukhulu bokususwa okanye bokufakwa nangaliphi na ixesha. Ukuba uthatha isigqibo sokukhupha ucingo olususwayo, imilinganiselo yokhuseleko lwephuli kufuneka ihlangane kamva ngumjikelezo okanye ucingo lwangaphakathi lwechibi.
Iindidi zamachibi zinokwahlulwa njengasemadamini omhlaba okanye ngaphezulu kwamachibi omhlaba ngokuxhomekeke kwindawo eyakhiwe emhlabeni. Isiziba somhlaba esingasentla sisisombululo esifanelekileyo njengesisombululo sethutyana okanye indlela entle yokujongana nendawo encinci. Amachibi omhlaba angentla sisisombululo sethutyana okanye sinokuba sisigxina ngokuxhomekeke kwiimfuno zabaxumi. Imfuno yocingo lokhuseleko iya kuhlala injalo nokuba ingaphezulu komhlaba okanye emhlabeni.
Inxalenye yokusebenza kocingo lwedama inikezela ngokhuseleko kubantwana nakubantu abadala ngokunjalo enokuthintela ukufa okulusizi kunye nangengozi ngenye indlela kungadla ubomi. Amabali amabi kakhulu abantwana abangaphantsi kweminyaka emi-5 ubudala abancama ubomi babo ikakhulu kungenxa yokunqongophala kolwazi lokhuseleko olunxulunyaniswa namacala echibi.
Ngenxa yoko, imigaqo ethile yamkelwe kule minyaka idla ngokutshintsha ngokuxhomekeke kurhulumente, ilizwe okanye iintlobo zamachibi. IBhunga leKhowudi yaMazwe ngaMazwe ngumzimba oqhelekileyo owamkelwa ngamazwe amaninzi kwihlabathi jikelele malunga nemilinganiselo yokhuseleko ekufuneka ithotyelwe. Okuqhelekileyo imigaqo njengoko ichaziwe liKhowudi yeKhowudi yeHlabathi zezi zilandelayo:
Ucingo kufuneka lube zi-intshi ezingama-48 ubuncinci ubude
Umgaqo kaloliwe ophakathi oxwesileyo kufuneka ubuncinci ube zi-intshi ezingama-45 ngaphezulu komgaqo ongaphantsi oxwesileyo
Isithuba phakathi kwepikethi masibe ngaphantsi kweesentimitha ezi-4.
Isithuba esiphakathi kwezantsi kaloliwe oxwesileyo kunye nomhlaba kufuneka sibe ngaphantsi kweesentimitha ezi-2.
Amasango kufuneka azivala kwaye azitshixe.
Amasango kufuneka avule ngaphandle (kude nendawo yedama).
Isixhobo esisebenzayo se-latch kufuneka sibe ne-intshi ezingama-54 ubuncinci ukusuka ezantsi kwesango okanye iya kuba kwicala lechibi lesango ubuncinci i-intshi ezi-3 ngezantsi kwaye ayizukuvulwa ngaphezulu kwe-1/2 intshi ngaphakathi kwe-18 ii-intshi zendlela yokukhululwa.
Amazwe amaninzi kwihlabathi liphela alandela umthetho onxulunyaniswa nokubiya kwephuli apho iFrance yayililizwe lokuqala laseYurophu ukwazisa imithetho ngokubhekisele kwizithintelo zamachibi. Kwilizwe lanamhlanje amazwe amaninzi anemithetho yokubiyela iphuli njenge-UK, Canada, South Africa kunye neNew Zealand. Nangona kunjalo e-US akukho mthetho unjalo nangona umbutho wePhuli kunye ne-Spa Professionals ulandela imigaqo ethile enikezelwe kumadanyana kunye ne-spas. Kodwa amazwe anjengeCalifornia, Texas, neArizona ayanyanzeliswa ngokubhekisele ekuqhubeni kwamachibi.
Kukho iindlela ezininzi zokubiyela iintlobo ezikhoyo ekufikeleleni kwakho kodwa ukhetha ukubiyela okufanelekileyo kwimfuno yakho kwaye iyadi yephuli kuxa kuvela isidingo somyili / uyilo. Nangona injongo yocingo lwechibi kukuthintela iingozi, ubuhle kunye nokucaciswa ukuba ucingo lwamachibi oluthwala eyadini yakho lunokubaluleka njengalo msebenzi.
Apha ngezantsi kukho iindidi ezaziwa kakhulu zokubiya echibini ngolwazi oluthile ngokubhekisele kubuhle nakwindlela ethile yesitayile ngasinye. Ukongeza, uya kufumana amaxabiso asisiseko adwelisiweyo ocingo olufakiweyo kwikontraki yobungcali.
Iingcingo zeChibi leMetro zinokuza kwiindidi ezahlukeneyo kunye nesona sitayile sithandwayo e-US ukuba ibe sisimbo sokuhombisa ialuminium. Okwangoku uthango lokuhombisa lolona hlobo ludumileyo locingo lwamachibi eMelika ngenxa yomelele kunye nokubonakala komtsalane. Ukusebenza ngokulula kokubiyelwa kwealuminium kunye nobuhle kukuba kutheni ukubiyela i-aluminium echibini kufanelekile echibini.
Ucingo oluqhelekileyo lokubhukuda i-pool luyomelele kwaye ludla ukugqwala njengoko ixesha lihamba. Ezi ndidi zocingo zinokungcola ngokulula kwaye ziya kufuna umlinganiso owongezelelweyo malunga nolondolozo. Iindidi zentsimbi zocingo zinokupeyintwa ukuze ufumane inkangeleko oyifunayo.
Iingcingo zechibi lensimbi zihlala zithwala izinto zokuhombisa ukuze zicoce ngasemva kwendlu kancinane. Ucingo olubiyele ngentsimbi olunokubhala lunokongeza ubuhle kunye nemveli yemveli enokuthi yakhiwe ngentsimbi eyenziwe ngesinyithi kunye nentsimbi ngokunjalo. Ezinye iingcingo zesinyithi zibandakanya isinyithi esenziwe kunye nentsimbi engenasici.
Uhlobo lokubiyela ngeAluminiyam luxabiso lwexabiso eliphantsi, oluyinyani lothango lwentsimbi olwenziweyo oluza kungena kwimigca ethe tyaba okanye emi nkqo okanye kwisilaydi. Ulondolozo rhoqo luyimfuneko kuba amathuba aphezulu ukurusa kwiimeko ezithile zemozulu. Uhlobo lothango lukhuni kakhulu kwaye luhlala ixesha elide kuphela ukuba unonophelo oluyimfuneko lubonelelwe. Yintoni eyenza ukuba inganyangeki kakhulu kwiingozi zangaphandle ngumaleko wangaphandle wengubo yomgubo eyenza ukuba ucingo lubenomtsalane.
indlela yokwenza isaphetha esineribhoni ebhityileyo
Amaxabiso okubiyela ichibi lealuminium anokuhluka ngokuxhomekeke kubume bakho, indawo yokugubungela kwaye ukuba wenza ufakelo ngokwakho.
Umgangatho weAluminiyam Pool Fence (4ft ubude kubude obuyi-164ft ubude) - $ 4100 - (6ft Ubude kubude obuyi-164ft ubude) - $ 4920
Nangona uphawu olomeleleyo locingo lwetyhubhu yealuminium lunokuqinisekisa ngokwaneleyo, intengiso yanamhlanje ngokuqinisekileyo inikezela ngoludwe olungcono lweentlobo ezahlukeneyo ezongeza kunxweme lobuhle. Izibonelelo kukuba ucingo luhlala ixesha elide kwaye aludingi kulondolozwa okunzima. Nangona ayilunganga ngokugqibeleleyo njenge ucingo lwabucala inokuza ngokufanelekileyo xa ukusebenza kwayo kunye nokulula kokugcinwa kuqwalaselwa.
Ukuba lolunye lweendidi zocingo olubizayo, yintoni ebiza ixabiso lemali yezinto kunye nokuhlala ixesha elide. Amanyathelo okhuseleko kufuneka athathelwe ingqalelo imeko yentsimbi efuna ukulungiswa rhoqo. Ezi zicingo zihlala zakhiwa nge-Iron okanye ezinye iintlobo zentsimbi kubandakanya isinyithi. Isinyithi esenziweyo isenokungabi lolona khetho lufanelekileyo lokujonga eyadini efuna ubugcisa obuncinci kodwa ngokuqinisekileyo iya kongeza ukujija kobugcisa obuhlaziyiweyo.
Umgangatho osetyenzisiweyo wocingo lwentsimbi $ 2400 - $ 2700
Uluhlu oluphakathi lwenziwe nge-Iron Fence $ 2800- $ 3100
Umgangatho ophezulu owenziwe ngentsimbi ebiyelweyo $ 3200- $ 3400
Nceda uqaphele ukuba imali ibalwa ngeenyawo ezili-164 zokulinganisa ukubiya. Amaxabiso ayahluka ngokuxhomekeka kubude bocingo kunye nokuchazwa kwentsimbi eyenziweyo.
Ucingo lokucoca i-iron iron olwenziweyo kufuneka lugcinwe rhoqo kwaye kuyacetyiswa ukuba upeyintwe ngeenjongo zokugcina. Yomelele njengokuba injalo, ucingo luneemfuno zolondolozo.
Ukuba ucingo olunomtsalane kodwa olungenasondlo alunakwenzeka kuwe, ucingo lwe-vinyl ngokuqinisekileyo lunokugcinwa okuninzi. Ucingo lunokwakhiwa ngaphakathi ngokwenqanaba labucala onqwenela njalo. Ucingo oluthandekayo loloyiso olukhulu kwintengiso kuphela ngenxa yokusebenziseka kakuhle kunye nenkululeko oyinikayo.
Iingcingo zechibi le-vinyl zinokugcinwa simahla kwaye zibonelela ngokhuseleko oluphezulu ngokunjalo. Ucingo lweVinyl luhlala lwenziwa nge-vinyl yeBakala ephezulu. Ukuqina, ukungasindi luhlobo lohlobo oluthile locingo. Amaxabiso awaphakamanga njengoko unokucinga ngokugweba indalo eguqukayo kunye nezibonelelo zayo. Ezi ntlobo zocingo zihlala zisiya newaranti yobomi. Yintoni enomtsalane malunga nevinyl kukuba amaxabiso asezantsi ngokufanelekileyo ukuba abe nokuqhelana nohlahlo-lwabiwo mali olusezantsi.
Iindleko zocingo olumhlophe lwevinyl:
Ucingo oluqhelekileyo lweVinyl $ 3900- $ 4050
Uluhlu lweVinyl yaphakathi kuLuhlu $ 4300- $ 4500
Umgangatho ophezulu weVinyl Fence $ 5200- $ 3600
Nceda uqaphele ukuba imali ibalwa ngeenyawo ezili-164 zokulinganisa ukubiya
Ukubiyelwa kwePVC kunokuba lucingo olukhulu lwabucala olufuna ulondolozo olusezantsi ngokufanelekileyo. Iindidi zezitayile onokukhetha kuzo yindawo yokudibanisa ukunyusa uhlobo oluthile locingo. Ukulungiswa kocingo kufakiwe kwiphakheji kwakhona. Ubuninzi bocingo yindawo ephambili engathandekiyo ethanda ukwaliwa ngabathengi. Ukungafumaneki kwemibala onokukhetha kuyo, umhlophe ukuba ukhetho oluqhelekileyo yenye into engalunganga. Kwaye amasango athambile ukuhla ezantsi ngexesha.
Iipaneli zeglasi ezibonelela ngombono yenye yezocingo zepremiyamu ezenza ukuba zibize ngokufanelekileyo. Iglasi iza ngobushushu obunokuxhathisa kunesakhelo seglasi esiqhelekileyo. Ucingo luza macala omabini, luyilo olukhuselekileyo nolungafakwanga ngaphandle oluvumela umsebenzisi ukuba abenombono ongcono. Iglasi eqingqiweyo ithandwa ngakumbi kunokusasaza okungakushiye uthathe isigqibo ngesimbo sesakhelo osithandayo. Amalungu e-Hardware ahlala edityaniswa ngentsimbi engenasici ukuze kuthintelwe ubungozi.
Ukubiya ngeglasi kunokuba ngaphezulu kwexabiso xa kuthelekiswa nezinye iindidi zocingo lweephuli. Kwaye ukucocwa kweepaneli zeglasi kunokuba yenye ikwayara eyakongezwa kwindlu yakho yokubamba indlu efuna ulondolozo rhoqo. Ucingo lweglasi lusebenza njengeprimiyamu ebonakalayo enikezela ngombono wokubona onika umbono wecala lechibi.
Iindleko zoCingo lweGlasi yePhuli- $ 11,500- $ 20,500
Nceda uqaphele ukuba imali ibalwa ngeenyawo ezili-164 zokulinganisa ukubiya. Amaxabiso ayahluka ngokuxhomekeka kubude beepaneli zeglasi kunye nezixhobo ezikhethiweyo
Iinkuni zinokuqina kwaye ziyamangalisa ukhetho lokubiya macala emachibi kwaye iyadibana nembonakalo yendalo kunye nengaphandle ngokunjalo. I-Wood slat inokubonakala intle kwaye inike ubumfihlo obufunekayo okanye iipali ezilula kunye neposti inokwenza ukuba indawo ibonakale ikhanya kwaye indalo.
Ucingo oluqhelekileyo lomthi luya kuxabisa iyonke- $ 1500-3500 ineedola ezili-12 ngeenyawo nganye.
Iingcingo zomthi zifuna ulondolozo nazo. Kwaye ucingo olukwaziyo ukunyuka yenye ingxaki abajamelana nayo abaninzi. Nje ukuba ucingo lweenkuni lufakelwe ichibi lokugcina amanzi liya kuba nemfihlo yonke kwinto yokuba umbono uya kuthintelwa. Nangona ungayithanda, umba wokungakwazi ukubona ukuba kwenzeka ntoni kwelinye icala kunokubangela neziganeko ezibi. Izinketho zokupenda kwimibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu, izitayile ezenziwe ngobuqhetseba zilusizo oluqhelekileyo lomthi. Isizathu sokuba uninzi lushiye iinkuni kukuba ulondolozo oluphezulu lufuna kunye nokujijisana okunokwenzeka njengoko ixesha lihamba.
I-Shadowbox Pool Fence
umtshakazi nomyeni umdaniso wokuqala
Olunye uhlobo locingo lwenkuni luyilo lwebhokisi yesithunzi. Yintoni enomdla ngebhokisi yebhokisi yesithunzi kukuba inepateni enomdla xa kuthelekiswa nezinye. Ukukhethwa kwezinto kunye nemibala kunokukhethwa ngokufanelekileyo.
Ucingo oluSisiseko lweShadowbox- $ 1000- $ 1800
Umgangatho weCedar Shadowbox Fence- $ 2500- $ 4000
Ucingo lwebhokisi yesithunzi yeVinyl- $ 3600 - 5300
Ucingo lwamachibi olususwayo sisisombululo esifanelekileyo kwabo bakhetha ukugcina iphuli ivaliwe / ivalelwe ngokuthanda kwabo. Ukuba bhetyebhetye kokususa xa kukho imfuneko akuthethi ukuba ayomelelanga ngokwaneleyo ukubonelela ngokhuseleko okanye ukuqinisekisa ubumfihlo kwaye ayithandeki kangako.
Iphuli yokudada enokususwa- $ 2300 - 2500
+1 isango (ixabiso ngama- $ 250)
Iingcingo ezikhutshwayo azifuni ukugcinwa okuphezulu kwaye ucingo locingo luhlala lusakhiwa nge-aluminium engonakalisiyo elandelwa yokwaleka komgubo we-UV okanye ivinyl.
Umnatha njengobume bocingo uthintela ukuba unganyukeki kwaye liqhinga elihle ngokwemiba yobuhle. Ukubona ngemisipha yeefilitha zokukhanya kwelanga kungaphazamisi umbono ngokubonelela ngokhuseleko lwabucala. Ilaphu lomelele kakhulu elinetoni efanelekileyo yelixesha langoku.
Ixabiso eliqikelelweyo yi- $ 125 ye-4 × 12 yeenyawo zocingo ukuba ithengiwe kwiAmazon.
Jonga oku ngasentla kocingo lokhuseleko lwamachibi e - IAmazon
Iingcingo zamachibi ezinokurhoxiswa zifakelwe ngokwesiko kwaye ziza kuyilo ezahlukeneyo. Banokuhlala ngaphezulu kwedama lokudada kwaye banokuqengqeleka xa ufuna ukudada. Olunye uyilo lwakhiwa njengendawo ebiyelweyo enkulu ekhusela ngokupheleleyo iphuli kwaye igcina abantu kunye nezilwanyana zasekhaya ngaphandle.
Ucingo olubuyisekayo olongeza kwimeko yezokhuseleko kwaye kwangaxeshanye lunegalelo kwindalo ethile yokuncedisana ayizi ngexabiso eliphantsi. Ukuhlala ixesha elide, ubhetyebhetye kunye nokulula kofakelo ngamanqaku aphambili okuba ucingo lukhetho lweprimiyamu. Ukhetho olongezelelekileyo lwendalo eguquguqukayo kunye nokungafihlisi kokuvumela ukukhanya kwelanga kugqobhoze kongeza kwiimpawu ezilungileyo ezibonelelwa ngocingo.
Iingcingo zamachibi ezinokurhoxiswa zibiza kakhulu kodwa zihlala ixesha elide kwaye zibonelela ngokulula ukufakwa. Izinto zepremiyamu zongeza ubuhle kunye nokungafihlisi ekubeni luphawu kuyintetho elungileyo.
Ucingo lwamachibi okwethutyana lunokuvakala lukhetho olufanelekileyo kuba lubhetyebhetye ngakumbi kunokufaka ucingo olusisigxina. Iingcingo ezininzi zethutyana zinokwakhiwa kwealuminium kunye namandla omzi mveliso weemathiriyeli ezindongeni. Ngokwesiqhelo ukubhola kumgangatho okanye kwipatio kuyafuneka ukuqinisekisa ukuba ucingo luhlala endaweni kwaye alunakunyuka ngokulula phantsi kwalo. Nangona kunjalo, ucingo luyakususwa ngamaxesha apho kungafuneki.
Yazi xa ujikeleze abantwana abancinci okanye izilwanyana zasekhaya idama lethutyana lisenokungabi sisisombululo esaneleyo sexesha elide ngokubhekisele kukhuseleko lwendawo yakho yokudada. Ukongeza jonga i-HOA yobumelwane okanye isixeko kunye nemigaqo yaseburhulumenteni ukuqinisekisa ukuba ucingo lwephuli oyikhethileyo luyahlangabezana nazo zonke iimfuno eziyimfuneko.
Jonga le aluminium kunye nocingo lwexeshana olunamasango- IAmazon
Akukho lucingo lweHole pool lolunye uhlobo ngenxa yendlela elula yokujongana nemicimbi emininzi onokuthi ujongane nayo kwimeko yangoku. Inqaku lokudibanisa malunga nenkqubo yocingo kukuba ayifuni imingxunya ukuba igrunjwe emhlabeni endaweni yoko iziseko zigcwaliswa ngamanzi okanye isanti eyenza ukuba kungabikho nto xa ushukuma uphelele, kungenjalo ungabinanto.
Ezona zinto zinomtsalane ziindleko eziphantsi ngokufanelekileyo, ukuhlala ixesha elide kunye nokuba bhetyebhetye kunye neepropathi zobuhle ezibonelelwa njengephakheji. Ngokungafaniyo nezinye iintlobo zocingo, into ephawuleka kukuba yonke le nto ithathwa yiprojekthi ye-DIY okuthetha ukuba ukusuka kwinkqubo yofakelo ukuya kulondolozo lomsebenzi unokusingathwa ngumnini khaya ngokulula onefuthe elikhulu kwindleko iyonke. Akukho cingo lomngxunya luza kubini: isiseko kunye nocingo. Nje ukuba isiseko sidityaniswe nezinye iziseko kwaye sihlanganisene ukubiyela ichibi kunokufakwa emva koko.
Nangona umntu enokubhideka phakathi kocingo olunemingxuma / lomnatha, olususekayo, olunokurhoxiswa kwaye akukho lucingo lomngxuma kukho umahluko okomzuzu phakathi kwezi ntlobo ikakhulu zinxulumene nezinto ezisetyenzisiweyo kwaye zinokuba yeyona ndlela ifanelekileyo yokwenza ukubiya kwephuli yabantwana.
Ukungabinayo eyadini yakho eyonakaliswe yimingxunya egrunjwa okanye ukungabinagunya kwiyadi kunokubangela iingxaki ezinkulu ezinxulumene nephuli. Oko kuqatshelweyo, ucingo lwechibi 'lweHole Hole' okwexeshana yindlela echuliweyo yokujongana nemicimbi ngokunikezelwa ngeepali eziqinileyo onokuzizalisa ngesanti okanye ngamanzi okwenza kube nzima kakhulu ukuhambisa ezinye izinto ezingenanto. Iziseko zakhiwa nge-polyethylene.
Emva kwexesha iziseko kunye neepaneli zemesh zinokuqhotyoshelwa ngokwemigaqo efanelekileyo ngokwezikhokelo ezibonelelweyo. Olona ncedo luphambili lokuba akukho lucingo lomngxunya onalo ngaphezu kolunye uthango lwethutyana / olusisigxina lokubabaza luncedo kakhulu kwaye akukho mngxuma ungaphantsi ongayi konakalisa ubuhle beyadi.
Iipaneli zocingo lwedamini lwakhiwe ngobude obudibanisa kunye nofakelo lwe-DIY. Zifumaneka kuludwe lwezixhobo kunye nobukhulu ngezona zithandwa kakhulu i-vinyl kunye nealuminium ngenxa yokuxhathisa kwemozulu kunye nokuqina kwayo.
Iipaneli zokubiyela iAluminiyam zenziwe ukuba zibonakale zinomtsalane kwiyadi yephuli edla ngokwenziwa kwialuminium engasindi kujongwa ukuthuthwa okulula. Izinto ezinamandla, ezizinzileyo zinokhetho lwemibala onokukhetha kuyo kwaye inokufakwa ngokulula kuba iipaneli zenziwe kwangaphambili.
Ezi zithuba zinoku-odolwa okanye ziqhotyoshelwe ngezithuba ezikhoyo. Uyilo lwangoku, olucekeceke lwepaneli lukhetho olufanelekileyo kwi-vibe encinci ejikeleze iyadi ebambelela kwimigangatho yokhuseleko ngokubanzi. Iiphaneli zokubiya echibini nokuba kungenziwa ngesiko ukuze zilungele iimfuno zomsebenzisi eziza kukhululeka.
Iphaneli yentsimbi ebiyelwe ngesinyithi yenye indlela yokukhusela kunye nokusebenza kwayo. Uncedo lofakelo lwexeshana kungoko iphaneli yedama ifumana ukuthandwa kwayo. Iiphaneli zigutyungelwe ngomaleko oshushu wedip galvanization.
Jonga le phaneli yocingo lwevinyl e-Wayfair
Izithintelo zocingo lwamachibi angaphezulu komhlaba ziyenyuka kakhulu kwaye ziyanceda ukugcina abantwana kude nephuli. Ucingo lwedike lomhlaba olungasentla lungakhiwa ngezinto ezahlukeneyo ezinjengevinyl, iglasi, ukhuni kunye nentsimbi eyenziweyo. Iqonga elingaphezulu kocingo lwamachibi omhlaba yintsingiselo yolu suku lwanamhlanje njengoko linika ubushushu obufudumeleyo, obutofotofo endaweni yenkqubo yesiko elapha ngasentla elingathandekiyo kwiliso.
Ngaphezulu kocingo lwedama lomhlaba yindlela efanelekileyo ngokokhuseleko. Ezi khithi zocingo zedama zomhlaba ezingentla ziyafumaneka kwiindawo ezahlukeneyo eziphakamileyo umzekelo i-intshi ezingama-24 kunye nee-intshi ezingama-36. Ikhithi intle ngasemva kwaye i-stunner ngaxeshanye.
Ngaphandle kokukhetha i-vinyl, ukhuni kunye nentsimbi eyenziwe, ezi zixhobo zakhiwe nge-resin enzima ngokunjalo. Iikiti zibandakanya izixhobo zentsimbi ezingenasici, izinto zokuhombisa kunye neebakaki ezinokuhlengahlengiswa kwiphakheji njengokhetho lokukhetha.
Ukutshixa iiseyile zamasango kunye neposi yelanga okanye izibane zocingo zizinto ezimbalwa ezinokuncediswa ngesixhobo sokucoca echibini esingentla ikakhulu sijolise kukhuseleko lwababhukudi. Iiphakheji zokubiya zechibi elingaphezulu komhlaba zihlala zibonelela ngokubiyela, iipali zocingo kunye nezixhobo kunye nesikhokelo solwazi olufunekayo. Ikhithi yocingo lokubhukuda iqinisekisa abasebenzisi bayo ukuba iphaneli ayigcinwa ifumaneka kuluhlu olubanzi lwemibala.
Kwicingo lokhuseleko lomhlaba wamachibi luza njengephakheji enehardware eneepaneli esele zidityanisiwe kunye nesikhokelo solwazi. Ngokwesiqhelo i-4 ft ukuphakama, ukunyuka kumphezulu onganyangekiyo yindlela ezalisekiswa ngayo imilinganiselo yokhuseleko yeepaneli.
Ngokufanelekileyo omnye umaleko wokukhusela abantu abadala, abakwaziyo ngokwahlukileyo, abantwana kunye nezilwanyana ezifuywayo zithintelwe ngumsonto oqinileyo we-polyester eyilaphu elisekuhleni, apho umntu omdala ebenokukhulula kwaye angene kwindawo ethintelweyo lula kuye.
Ucingo lokukhuseleka echibini alunakufakwa kwimizuzwana ngalo lonke ixesha kukho imfuneko yokujonga okungcono echibini. Ukuba khaphukhaphu, amacandelo ocingo echibi anokugoqwa kwaye agcinwe kwaye imingxuma esemgangathweni enamacandelo ocingo echibi inokugqunywa ngeplastiki xa ucingo lwechibi lungasetyenziswa.
Kuqhelekile ukubona ukuba ngaphezulu amachibi asemhlabeni asetyenziswa njengezisombululo zethutyana apho ikhithi yocingo lokhuseleko iza kunye nedama uqobo. Kodwa, echibini elingasentla elingasentla komhlaba eyadini yakho kukho iindlela ezikhoyo ezenzelwe ukuphucula ubuhle bechibi elisecaleni
Jonga olu khuseleko echibini lokucoca ukhuseleko kwi - IAmazon
Xa ukhuseleko luyeyona nto iphambili, ukuzonwabisa nokuzonwabisa kunokuba yinto yesibini. Kodwa ngezisombululo ezizezinye ezinikiweyo kwihlabathi lanamhlanje umda kulonwabo awusengomqobo. Iingcingo zokubhukuda zabantwana ziyafumaneka kwimarike ngeendlela ezahlukeneyo.
Ukukhululeka kokususwa kunye namandla eepaneli zecingo lokubiyela ukuxhathisa kuzo zonke iintlobo zemozulu kunye namasango okuzibamba kungoko kutheni iingcingo zamachibi abantwana kufuneka zifakwe kufutshane nolwandle. Ukubambelela kwimilinganiselo yokhuseleko enjengeepali eziqiniswe kathathu kunye nezinto ezinganyangekiyo ze-UV ezibonelela ngokhuseleko olongezelelweyo sele zibekiwe kwizakhiwo. Iiphaneli ziqinisekisiwe ukuba zihlala ixesha elide kungekho thuba lokuphela okanye ukuncipha okuthembekileyo nakwezona meko zimbi.
Ezinye iipaneli zinakho ukubumba ngokutsha ngokokuma kwephuli. Eyona nto inomdla kukuba amacandelo eepaneli zokubiya abonelela ngokuguquguquka kokufakwa kubandakanya izakhiwo esele zikhona ezinjengeentsika / iikholamu okanye izakhiwo ezima simahla. Rhoqo iingcingo zakhiwa ngefilglass edityanisiweyo kwaye ucingo lwakhiwa ukusuka kwimozulu yobungqina bemozulu okanye indibaniselwano yethayile ye-vinyl kunye neplastikhi enjengomaleko obonakalayo omelene neengozi zemihla ngemihla.
Ucingo lwe-Wood slat lwabucala malunga nephuli
Ipuli yokuqubha esemva kwendlu enocingo lweglasi kunye nesamente yabucala
Ucingo lokhuseleko lweAluminiyam olujikeleze iphuli
Uluhlu lokubhukuda olunodonga lweplanethi ledger
Ukubiyela iphuli yentsimbi
Ipuli yokudada enamatye abucala eludongeni
Ukucoca iphuli yentsimbi ebiyelweyo ejikeleze iipatio
Ucingo lokubiyela icider
Ucingo olumhlophe lwevinyl lokucoca ulwakhiwo lwe lattice ephezulu
Olu cingo lwanamhlanje lwechibi lokucoca ngeglasi lubonelela ngeembono ezingathintelwanga kwimiboniso yekhaya lasekhaya
Iglasi kunye nocingo lwealuminium lokhuseleko
Ucingo olukhulu lokhuseleko lwephuli yealuminium
Ucingo oluncinci lwealuminium emnyama
Ucingo lwephuli emhlophe yePVC
Ucingo lwedike yealuminiyam ngenxa yethambeka lenduli kunye nokwandisa imibono
Ucingo lokubiyela lwabucala olomeleleyo
Isitayile samaplanga echibi lokubiya
Kukho ukhetho olukhulu olukhoyo lokubiyela amadama akho okuqubha kwaye sikholelwa ekubeni ukukhetha ucingo oluchanekileyo lwedama lakho kubaluleke kakhulu ngokubhekiselele kukhuseleko, ukusebenza kunye nobuhle. Khetha leyo ilungele indawo yakho kwaye ihlangabezane neemfuno zekhaya lakho, ubumelwane kunye nosapho.
Uyilo lwangaphandle Iigalari onokuzithanda:
Uyilo loBiyelo - Iingcamango zokuqubha - Amachibi okudada aManzi - Amachibi okudada amahle
iiplani zendlu yokuchitha ipali
igumbi lokugcina izinto zokudlala
yintoni efayo rsvp ime
iinwele zomtshato zeenwele ezintle
Umahluko phakathi kwendandatho yesithembiso kunye nomsesane wokuzibandakanya
iringi ebiza kakhulu kwihlabathi 2020